Dibanisa ingxoxo kunye neSiza sakho kwimizuzu emi-5 | Martech Zone
Dibanisa ingxoxo kunye neSiza sakho kwimizuzu emi-5
NgoLwesine, Septemba 1, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Ngaphezulu WPEngine, Ndiqaphele ukuba baqhuba inkqubo yencoko emnandi kwi-Intanethi ethe yavela emva kwemizuzwana engama-45 kwisiza. Ngakumbi nangakumbi abathengi bethu bebesicela isisombululo esinje, ndiye ndenza ukumba kwaye ndothuswa yinto endiyifumeneyo!
SnapEngage yinkqubo yokuhlekisa elula yewebhusayithi yakho ethatha malunga nemizuzu emi-5 ukuyifaka:
Kuqala, ugcwalisa ezabo Widget kwaye ushumeke kwiskripthi kwindawo yakho.
Emva koko, unxibelelana 'neendwendwe' ezibonakalayo Gtalk okanye Skype.
Yiyo leyo… ugqibile! Ngokukrakra!
Iqonga linetoni yolongezo olwenziweyo olufumanekayo ukuze senze izinto ezimbalwa:
Sililungiselele iqhosha kwaye siphucula itemplate (ifuna i-akhawunti ye-49 / mo yeakhawunti okanye ngaphezulu).
Songeze ikhonkco "Ncokola nathi" kwiphepha lethu le-Facebook (inqaku leBeta).
Sityhala ifayile ebhaliweyo kwibhokisi yethu engenayo.
Songeze ukudityaniswa kwe-Basecamp (akukho ndleko) ukuze incoko nganye iqale umsonto kwiprojekthi entsha esiyibize ngokuba 'Zikhokele'. Zidibanisa nenani leeCRMs (kubandakanya iSalesForce) kunye needesika zoncedo.
Songeze abasebenzi abaninzi (iakhawunti yeshishini ivumela ukuya kuthi ga kwi-4) kwaye bazenzela iifoto ezizizo.
Ungahlengahlengisa iqhosha ukuqala ingxoxo naphina kwindawo yakho, sikhethe icala lasekunene:
Cofa iqhosha kwaye ingxoxo ivule. Ukuba akukho mntu ufumanekayo ukuphendula umbuzo, umane uthumela i-imeyile kuwe. Ukuba ukwi-Intanethi, iyangena kwi-Skype okanye kwi-GTalk ngokwahlukeneyo!
Jonga onke amanqaku e SnapEngage kwiphepha labo leempawu-zombini zomelele kwaye ziyafikeleleka! Eli lixesha elimangalisayo lokutyelela abantu abatyelele indawo yakho kwaye linika ithuba elihle lokuthatha isikhokelo esinokungafumani into abayifunayo kunye nokushiya indawo yakho ngokupheleleyo.
Owu ... ewe, lelo likhonkco lokudibana!
IiWebhusayithi zeShishini ziBuyisa amaRhafu kunye neengcebiso
I-PunchTab: Imivuzo yoLuntu kunye nokunyaniseka kuyo nayiphi na indawo